कीकबक्सींग ब्यबसायीक बन्दैछ ः श्रेष्ठ « KhelkudNews.com
कीकबक्सींग ब्यबसायीक बन्दैछ ः श्रेष्ठ
Published On : 11 September, 2014 8:50 pm
दिपक श्रेष्ठ नेपाली करातेका परिचित नाम । अढाइ दशक भन्दा बढी कराते र किक बक्सींगका लागेका यी प्रशिक्षक अहिले कीक बक्सीगको ब्यबस्थापनमा सक्रिय छन् । नेपाली करातेमा अब्बल रहेको एपीएफ क्लबका कराते प्रशिक्षक तथा दिपकसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
कीक बक्सीगमा लाग्नु भएको कत्ति बर्ष भयो ?
२०४५ मा कीक बक्संीग र करातेमा लागेको थिए । थानेश्वर राइसंगसंगै कराते र कीक बक्सिग एकै साथ अघि बढेको थियो । इटालीका चाम्पोलीलले नेपालमा कीक बक्सीग भित्र्याउनु भएको हो । पछि करातेले अफीसीयल रुपमा फराकिलो क्षेत्र ओगटे पछि यी दुइ संगै जान नसक्ने भए । यस कारण हामीले कीक बक्सिंगलाई जिल्ला प्रसासन कार्यलयमा दर्ता गरायौ । यस पछि हरी बाबु चौधरी सदस्य सचिव भएको समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको हो । यो अहिले बिस्तार हुदै २४ जिल्लामा पुगेको छ ।
अहिले कीक बक्सींगको अबस्था कस्तो छ ?
आर्थीक समस्याका कारण हामी अन्तराष्ट्रिइ प्रतियोगितामा त्यत्ति सारो सहभागिता जनाउन प्रतियोगितामा हामीले दुइ रजत र तीन काश्य पदक पनि जित्यौ ।
तपाइ आफूले कराते र कीक बक्सींग दुवै क्षेत्रमा कसरी ब्यबस्थापन गर्नु भएको छ ?
बिहान करातेको प्रशिक्षणमा ब्यस्त हुन्छु । कीक बक्सींगको ब्यबस्थापनमा ब्यस्त हुन्छु । दुइ प्रशिक्षकलाई सहयोग गर्छु । दुवै तर्फ ध्यान दिदा पनि मैले करातेको प्रशिक्षकको रुपमा गर्व गर्न लायक नतीजा दिलाएको छु । कीकबक्सींगकको ब्यबस्थापनमा पनि सहयोग गरेको छु ।
एकदम राम्रो छ । फैलदो छ । हामीमातहतका प्रशिक्षकको मिहेनत र परिश्रमको कारण मैले नेपालमा कीक बक्सींगको भबीश्य उज्वल देखेको छु । हामी केही समय पछि नै अन्तराष्ट्रिइ स्तरको ब्यबस्याीक प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै छौ । एक लाख प्रथम पुरस्कार रहेको त्यो प्रतियोगिताले हामीलाई नया दिसा दिने छ ।